Home City APK Download - Android Lifestyle Apps
APK Downloader Apps Lifestyle Home City
Home City သည် မြန်မာပြည်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော အိမ်ခြံမြေ MobileApplication ဖြစ်ပါသည်။ Home City Application သည် မြန်မာများအိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူငှားရမ်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးရန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ Developer များမှ ရေးသားထားခဲ့သောApplication ဖြစ်ပါသည်။ Application တွင် မြန်မာစာကိုသာသီးသန့်အသုံးပြုထားသောကြောင့် အသုံးပြုရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု Application Version 1.5 တွင်အောက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သောအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။- အလိုရှိသောဝယ်လို/ငှားလိုသော အိမ်ခန်းများကို အဆင့်မြင့် Search Form များ ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ခြင်း- မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်းရှိကုမ္ပဏီအများအပြား၏ Data များ ပါဝင်ခြင်း- ကုမ္ပဏီများ၏အချက်အလက်များသည် အပတ်စဉ် Update ဖြစ်နေခြင်း (Data အဟောင်းများ၊ရောင်းပြီးသား Data များ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်)- အလိုရှိသောအိမ်ခြံမြေ အချက်အလက်များကို ရရှိပြီးပါက မည်သည့်အကောင့် Registrationမှ ပြုလုပ်ရန်မလိုပဲ အလွယ်တကူ သိမ်းထားနိုင်ခြင်း- မိမိနှစ်သက်သောအိမ်ခြံမြေ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုချင်းစီ၏ အချက်အလက်များကို သီးသန့်ရှာဖွေနိုင်ခြင်း- Construction ကုမ္ပဏီများ၏ ကြိုပွိုင့် Projectများကို သီးသန့် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း- နေ့စဉ် အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကိုဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း- အိမ်ခြံမြေ နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍတွင် အိမ်Decoration နှင့် အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့လုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း- Home City Application ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အကြံပြုရန် နေရာပါရှိခြင်း- Click တစ်ချက်တည်းဖြင့် Application ကိုUpdate ပြုလုပ်နိုင်သော Function ပါရှိခြင်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် HomeCity Application ကို အစဉ်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်လျှက်ရှိပါသည်။ HomeCity Application တစ်ခုတည်းဖြင့် သင်၏ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Version 1.2 တွင် -အသေးစားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားပါသည်။Version 1.3 တွင်- သတင်း Updateများကို နေ့ရက်အလိုက်ပြန်လည် စီစဉ်ထားပါသည်။- Facebook ပေါ်တွင်မိမိနှစ်သက်သော အိမ်ခန်းကို Share ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။- Search Boxတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ရှာဖွေ၍မရသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။-Notification ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။Version 1.4 တွင်-မြန်မာစာဖောင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် Setting ထည့်ပေးထားပါသည်။-အထူးကြော်ငြာများ ကဏ္ဍကို ထပ်မံထည့်သွင်းထားပါသည်။Version 1.5 တွင်-ကြိုပွိုင့် တိုက်ခန်းများသီးသန့် ဖော်ပြထားသောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ ကဏ္ဍထည့်သွင်းထားပါသည်။-အိမ်ခြံမြေနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍ ထည့်သွင်းထားပါသည်။- အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေရန် အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။Home City is the mobileapplication that is developed in Myanmar. An application to helpMyanmar people search for the properties to buy and rent. It isdeveloped by Myanmar developers. Everything in the app is inMyanmar language. It includes the following functional things inversion 1.0.- Able to search for the property with very intelligentbuy and rent search forms.- Includes most of the companies incurrent Myanmar real estate market.- Weekly up to date data fromthe real estate agencies (Almost ZERO old data)- Able to save thereal estate data that user like without any registration.- Able tosearch in particular agent.- Able to get updated real estate news.-Suggestion Box.- One click update for those whom are installed fromlocal.We are still developing our app to getting better. Staytune!For Version 1.2- Minor Bug FixesIn Version 1.3- We have sortedthe news update with date.- You can share the property you like onFacebook.- Fixed Search box problem.- Fixed Notification problem.InVersion 1.4- Added setting for Myanmar Font Fix.- SpecialAdvertisement section has been added.In Version 1.5- Section forConstruction Companies included.- Section for Miscellaneousbusinesses included.- Performance improvement.
App Information Home City
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha BayDin 4.5 APK
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ပါဝင်သော ဗေဒင်ဟောကိန်းများသည်ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် နှစ်အလိုက်ဟောစာတမ်း၊ အပတ်စဉ်ဟောစာတမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ဟောစာတမ်းတစ်ခုချင်းစီတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ နှင့်ပြုလုပ်ရန် ယတြာများ ပါဝင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် App ဖြင့်မိမိကံကြမ္မာကိုသာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင် ၊ သူငယ်ချင်း ၊မိတ်ဆွေများအတွက်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပြီး Facebook မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်Share ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application ၏အမည်သုံးစွဲခွင့်၊ ပုံသုံးစွဲခွင့်၊ ဟောစာတမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်များရယူလုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ The futureprediction algorithms used in Min Thein Kha BayDin Application arebased on the principle of Sayargyi Min Thein Kha. Min Thein KhaBayDin Application has featured Yearly prediction papers, Weeklyprediction papers. Each prediction papers includes the topics ofeconomy, health, social, marriage, education predictions, things todo and don’t, and advice to avoid unfortunate events. You can useMin Thein Kha BayDin app to find predictions for your family, yourfriends and colleagues and share on Facebook. The information anddata contained on this app are provided by Daw Than Nu Aung, whoown Intellectual Property and is authorized person to allow us touse Sayargyi “Min Thein Kha” name, image, prediction papers andtheories used in our app.
Wun Zinn - Myanmar Book 3.7.1 APK
Myanmar Books Store - Read on the move! Download one of the bestMyanmar Book Reader now! Optimized for mobile and tablets. Can runsmoothly on low-end android phones. You can read Myanmar Books,Magazines and Daily Newspaper, Cartoons, Audio Books. In the appyou can find many audio-books Audio book widgets make your audioplay very easy. Get Wun Zinn Application now! You can find over3000 Myanmar Books in WunZinn. Audio Book: Home screen widgets.Only 10 audio books in my collection. Free audio-books available.Wun Zinn Digest: Include famous quotation and short story. MyanmarBook: Best for reading and downloading Myanmar Books. Appetizer,free book, many category, automatically remembers the last readingpage position, support day and night reading support, arrange theauthor name with Myanmar alphabet, feels like reading Myanmar Bookin your hand. News Stand: Daily newspaper and journals. Magazines:Many monthly magazines such as The Faces, MODA, Eternal Light, FoodMagazine, The Irrawaddy, Happy Time, Hello Madam Fashion, Gems& Jewelly, Hello Madam Academy Cartoons: Many famous MyanmarCartoons such as တာယာပွကြီး၊ ဂျောက်ဂျက်၊ ဘိုဘို၊ မိပေါက်-ဖိုးကောက်and many more! Security: User log-In, password recovery, bookrecovery Special Option: Wun Zinn Digest, tutorials, login withyour existing mail and Facebook. Notifications on/offမြန်မာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀၀) ကျော်၊ ကာတွန်းစာအုပ်များစွာ၊ Audio Bookများ၊ ဂျာနယ်များ၊ သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ နှင့်ကလေးပုံပြင်စာအုပ်များကို ဝန်ဇင်းမြန်မာစာအုပ်ဆိုင်တွင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာစာအုပ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုလည်း အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်သည့်အပြင် စာအုပ်တိုင်းကိုလည်း အမြည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Myanmar Zawgyi Font 1.0 APK
မြန်မာစာမမှန်တဲ့ ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာအမှန်မြင်ရ ဖတ်ရအောင် အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။Myanmar Zawgyi Font ကို အသုံးပြုရန် Rootမလိုပါဘူး Font Style ပါပြီး Font လက်ခံတဲ့ ဖုန်းတွေမှာသာသုံးစွဲနိုင်မှာပါ။အသုံးပြုရန် ဖောင့်သွင်းမည် ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီးZawgyiMyanmarL ဖောင့် ကို Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဖောင့်ပြောင်းမည့်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ခုဏက ZawgyiMyanmarL ကို ရွေးပေးလိုက်ရင်ဖုန်းမှာ မြန်မာစာမှန်ကန်နေပါပြီ။ Font လက်ခံတဲ့ ဖုန်းတွေမှာသာသုံးစွဲနိုင်မှာပါ။
Myanmar Font စာလုံးလှများ 2.0 APK
Android ဖုန်းများစွာကို မြန်မာဇော်ဂျီဖောင့် နှင့်စာလုံးလှဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ💯စာလုံးလှသုံးချင်သူများ စိတ်ကြိုက်ယူသုံးလို့ ရပြီနော်..
Myanmar Custom Font 1.0 APK
အရမ်းလန်းတဲ့ နေရာတိုင်းသုံးစွဲနေကြတဲ့ မြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်.. Myanmar Custom Font ဖြစ်ပါတယ်။Myanmar CustomFont ကို အသုံးပြုရန် Root မလိုပါဘူး Font Style ပါပြီး Font လက်ခံတဲ့ဖုန်းတွေမှာသာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုရန်========ဖောင့်သွင်းမည်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Custom Font ဖောင့် ကို Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင်ဖောင့်ပြောင်းမည့် ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ခုဏက Custom Font ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ဖုန်းမှာ မြန်မာစာမှန်ကန်နေပါပြီ။ Font လက်ခံတဲ့ဖုန်းတွေမှာသာ သုံးစွဲနိုင်မှာပါ။
Myanmar Font 2018 1.0 APK
အမိုက်စား အလန်းစား မြန်မာစာလုံးလှများ ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုနည်း..ဒီဖောင့်အလှ (၁၀) မျိုးအနက်မိမိအသုံးပြုလိုသော ဖောင့်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Install Fontလုပ်ပါ။ပြီးလျှင် Change Font ကို နှိပ်ပြီး Font Style ကနေ ခဏကဖောင့်လေးကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရင် မြန်မာစာလုံးလှလေးနဲ့ ဖုန်းမှာမြင်တွေ့ ရပါပြီ။(မှတ်ချက်)၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ထွက် ဖုန်းတွေမှာ Font Changeမရတဲ့ ပြသာာနာတွေ ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ထွက် ဖုန်းတွေမှာ ဒီစာလုံးလှ(၁၀) မျိုးကို သုံးနိုင်အောင်လို့IFont နဲ့ ဘယ်လိုတွဲသုံးရမယ်ဆိုတာကိုပါ သေချာရှင်းပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကို ဆော့ဝဲလေးဒေါင်းပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
This is Myanmar song those who love myanmar music and myanmarsongburmese music myanmar mp3 myanmar song burmese song
Myanmar Translator 1.0 APK
ဘာသာပေါင်း / ၇ မျိုးကို ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ မြန်မာစာမှန်ကန်စွာအပြန်အလှန်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါပြီ။အခုTranslator ကတော့မြန်မာဘာသာတွက်ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်မြန်မာစာကိုတော့လုံးဝမှန်ကန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ် တရုတ် ဂျပန်ကိုးရီးယား ထိုင်း မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှာ စတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေကို မြန်မာလိုပြန်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
Myanmar Font Pro 1.1 APK
ဖုန်းတစ်လုံး လုံးကို တစ်နေရာမကျန် မြန်မာစာအကုန်မှန်အောင်ထည့်သွင်းချင်သူများ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ဒီဆော့ဝဲလေးမှာမြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း (၈) မျိုးကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။မြန်မာစာအခက်အခဲရှိနေတဲ့ဖုန်းများ ဆော့ဝဲလေးကို ဒေါင်းပြီးကိုယ်တိုင်ဘဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ..